Muxuu Jony Ive uga tagayaa Apple? Sagootin bilaabatay afar sano kahor | Wararka IPhone
Muddo sanado ah, tan iyo markii Steve Jobs qudhiisa la waayey, mid ka mid ah wejiyada ugu matalaya shirkadda Apple wuxuu ahaa kii Jony Ive. Naqshadeeyahaan cajiibka ah wuxuu horseed u ahaa wax soo saarka shirkadda muddo ku dhow soddon sano., waxaanan ka hadlaynaa Apple oo sii daayay iPod, iPhone, iPad, Apple Watch, MacBooks, iMacs, iyo AirPods.
Sida iska cad, qayb weyn oo ka mid ah guusha alaabooyinkani waxay ku saleysan yihiin naqshadooda, oo la koobiyeeyay oo ay ku daydeen ficil ahaan dhammaan soosaarayaasha si ka sii weyn ama ka yar. Taasi waa sababta ku dhawaaqista inuu ka tagayo Apple ay saameyn weyn ku yeelatay dunida tikniyoolajiyadda, iyadoo "nebiyadii" caadiga ahaa ee mar labaad ku dhawaaqayay hoos u dhaca rasmiga ah ee shirkadda. Laakiin tani maahayn maalmo, ama toddobaadyo, ama bilo. Waxay ahayd ka tagitaan gestas muddo afar sano ah, waxaana kuu sheegeynaa faahfaahinta hoose.
1 Aasaasiga u ah Apple-ka maanta
2 Sannadkii 2015-kii ayaa dhammaantood la bilaabay
3 Oo hadda laga bilaabo?
Aasaasiga u ah Apple-ka maanta
Tan iyo markii Steve Jobs oo ahaa hanadkii abuuray Apple kana badbaadiyay musalafnimada uu geeriyooday sanadkii 2011, waxaa jira dad badan oo sheegaya in Jony Ive uu ahaa masuulka ugu badan wixii alaabooyin ah ee la bilaabay, sida ay u shaqeynayeen iyo qaabeynta ay noqon laheyd. Shaqadiisii ​​shirkadda dhexdeeda ayaa ka gudubtay kaalintiisii ​​naqshadeeye, ilaha shirkadduna waxay isaga dhigeen isla heer la mid ah Tim Cook. xagga go'aan ka gaarista alaabada shirkadda.
Si kastaba ha noqotee sanadihii ugu dambeeyay waxay umuuqataa in doorka Jony Ive uu kujiray asalka. Dhammaantood waxay ku bilaabmeen bilawga Apple Watch ee 2015, laga bilaabo xilligaas waxaan bilaabay inaan ka tanaasulo xilalka, sida uu noo sheegayo Bloomberg isagoo soo xiganaya ilo aad ugu dhow shirkadda. Aniga oo kormeeraya shaqada kooxda oo dhan maalin kasta, waxaan sii waday booqashadiisa xafiiskiisa dhowr jeer usbuucii.
Sannadkii 2015-kii ayaa dhammaantood la bilaabay
Si sax ah waqtigaas, wareysi uu siiyay The New Yorker, wuxuu qirtay inuu "si qoto dheer u daalay", isagoo xaqiijiyay in sanadka ka hor bilaabista Apple Watch uu ahaa kii ugu adkaa tan iyo markii uu yimid Apple. Erayadaas kadib, inbadan waxay bilaabeen inay hubiyaan in doorka Ive ee shirkada uu bilaabi doono inuu ahaado mid aan khusayn. Kaliya seddex bilood kadib, Jony Ive waxaa loo magacaabay "Madaxa Sarkaalka Naqshadeynta," isagoo uga tagaya doorka kormeerka ee kooxaha qalabka iyo kombiyuutarrada naqshadeynta labo maamule, Alan Dye iyo Richard Howarth. Laba sano ka dib Ive ayaa ku soo laabtay si aan ula wareego qayb ka mid ah masuuliyadihii uu ka tanaasulay.
Haddana waan sii waday booqashada xafiisyada Cupertino dhowr jeer usbuucii, iyo shirar badan oo lagu qabtay San Francisco si looga fogaado in laga guuro gurigiisa loona guuro Cupertino. Mararka qaarkood waxay xitaa ku kulmaan guryaha shaqaalahooda, hudheelada ama tas-hiilaadka kale, xitaa inay xafiis ka samaystaan ​​San Francisco si ay shaqooyin badan uga qabtaan shirkadda Apple. "Kala-go'itaanka" mas'uuliyadiisa Apple wuxuu sababay inuu seego daah-furka mid ka mid ah wax soo saarka shirkadda, wax aan la malayn karin xilli kale.
Waxay ahayd wax dhacayay muddo dheer. Waxaad la joogeysay Apple qiyaastii 25 sano, waxayna ahayd shaqo aad u walaac badan mudadaas, waxaa la joogaa waqtigii qof walba u fududeyn lahaa.
Oo hadda laga bilaabo?
Marka hore wax badan isbadal kuma imaan doono shirkada, maadaama doorka Ive ee Apple sanadihii la soo dhaafay uu ahaa mid aan khuseyn, sida laga soo xigtay ilo shirkad ah oo xaqiijinaya Bloomberg. Laakiin hubin la'aantu waxay sii socotaa in lagu soo saaro dhinac ay shirkaddu daryeeshay tan iyo markii la aasaasay oo waligeedba lagu gartaa: naqshad. Hada Jony waan baxay Evans Hankey ayaa hogaamin doona kooxda nashqadeynta qalabka. Hankey waa hogaamiye weyn, laakiin iyadu ma ahan naqshadeeye, waana sababta shakiga looga dhalinayo doorka ay ku leeyihiin shirkadda. Wuxuu si toos ah u warbixin doonaa Jeff Williams, oo ah sarkaalka ugu sareeya howlgalka shirkadda.
Waxa ay dad badani ka baqaan ayaa ah iyagoon lahayn "naqshadeeye" madax iyo kooxda nashqadeynta oo ay hoos yimaadaan labo qof oo "ganacsato" ah caqabad abuurka waxaa la dhigi karaa meel aan horay u jirin. Kahor, Jony Ive wuxuu toos ugujawaabay Tim Cook, horeyna wuxuu toos ugujawaabay Steve Jobs. Waxay ahayd wax caadi ah in la arko labada oo ku dul wareegaya xarumaha shirkadda iyagoo go'aanno gaaraya.
Isagoo og in bixitaankani uu dhalin doono hubin la’aan ku saabsan mustaqbalka shirkadda iyo alaabooyinka soo socda, Tim Cook laftiisu wuxuu shalay si cad ugu sheegay warsaxaafadeedkiisa in "Jony Ive wuxuu sii waday inuu iskaashi la yeesho Apple oo ka socda istuudiyaha cusub."
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Muxuu Jony Ive uga tagayaa Apple? Nabad gelyo bilaabatay afar sano ka hor